केही आफ्नै कथा, ब्यथा अनि भावनाहरु: गर्मिको एक दिन
Posted by मनु ठाडा मगर (MANU) at 9:00 AM
Ramro sanga nai bite6 Manu jee ko din
हो ! अहिलेको गर्मीयाम को तापक्रम संगै ओल्डकप को तापमान पनि पक्कै पढेको छ ....अनि त्यो ५/१ अनुपात त जेहोस अपोजिट संयोग नै परेछ भन्दा पनि हुन्छ !
अनि विदेशमा नेपाली साथि संगीहरूसंगको अन्तरंग निकै रमाइलो संग विताउन पाउनु पनि निकै सौभाग्य को कुरा हो जस्तो लाग्छ ! हो त्यो समयमा आफ्नोपनको निकै अनुभूति हुन्छ, है ! अनि सबै दुख विर्सिएर खुसी महशुस गर्न सकिन्छ !